मुम्बईको अण्डरवल्र्ड संग डराएर अण्डरवेयरमा पैसा लुकाएका थिए चर्चित कमेडियन कपिल शर्माले – OSNepal
कपिल शर्माको नेटफ्लिक्स स्पेशल आई एम नट डन येट स्ट्रिम गरिएको छ। यस कमेडी स्पेशलमा कपिल शर्माले आफ्नो जीवनसँग जोडिएको रमाईलो कथा सुनाउँदै छन् । यस शोमा कपिल शर्माले आफ्नो जीवन, करियर, आमाबुवा, श्रीमती गिन्नी र डिप्रेसनका बारेमा कुरा गरेका छन्। कपिल शर्माले पहिलो पटक मुम्बई आउँदा कस्तो अनुभव भएको बताए । कपिल शर्माले आफू पहिलो पटक १२ सय रुपैयाँ लिएर मुम्बई आएको बताए ।
कपिल भन्छन्,– ‘ग्रेजुएसन गरेपछि तीन महिनाको ब्रेक हुन्छ, हैन ? म पहिलो पटक संघर्ष गर्दै १२ सय रुपैयाँ लिएर मुम्बई आएको हुँ । मसँग कलेजका केही साथीहरू पनि थिए । मुम्बईमा अन्डरवर्ल्ड छ भनेर हामीले धेरै सुनेका थियौं। यस्तो अवस्थामा डरले मैले आफ्नो पैसा आफ्नो अन्डरवियरमा लुकाएँ। कपिलले थप भने,– ‘जब म मुम्बई आएँ, म गरीब थिएँ र स्टेसनमा सुत्थेँ, मानिसहरूले धेरै भन्छन् । यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु । प्रहरीले लाठी हानेर भगाउँछ मान्छेले सोच्ने मौका पनि पाउँदैन ।
म र मेरा साथीहरू ज्ञज्ञ।घण् बजे दादर स्टेशनमा अवतरण गरेका थियौं। त्यसपछि त्यहाँबाट साथीको आफन्तको घर गयौँ । उनीहरूले हामीलाई सोधे, बिहानको खाजा खानुहुन्छ ? मैले हुन्छ भनेँ। त्यसैले उहाँले हामीलाई पोहा दिनुभयो। त्यो पोहा देखेर म अलमल्ल परें । मलाई लाग्छ कि उसले पनि केहि फेला पार्छ। किनकी मैले जीवनमा यस्तो खाली पोहा खाएको थिइनँ । मुम्बई आएपछि कपिल शर्माका लागि धेरै कुरा नयाँ थिए ।
यसबारे कपिलले आफ्नो कमेडी स्पेशलमा भनेका छन्,– पोहासँगै लिफ्ट पनि हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो । त्यतिबेला अमृतसरमा त्यति ठूलो भवन थिएन । त्यसैले हामी विभिन्न ठाउँमा लिफ्टमा माथि र तल रमाइलो गर्थ्यौं । यस्तै एक दिन हामी संयोगवश टी(सिरीजको अफिस पुग्यौं। हामीसँग पैसा भएको कारण मुम्बईमा ताडी पिउन थाल्यौ । कपिल भन्छन् कि जब उनको तीन महिना पूरा हुन थाल्यो, उनले ताडी पिएर मात्र मुम्बईको मजदुरी गर्न सक्छु ? पैसा, बिदा र ताडी सकिएपछि उनी अमृतसरस्थित आफ्नो घर फर्किएका थिए